Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay qaraxii maanta ka dhacay Muqdisho | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay qaraxii maanta ka dhacay Muqdisho
Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay qaraxii maanta ka dhacay Muqdisho
Muqdisho (Halqaran.com) – Inta la xaqiijiyay saddex ruux oo shacab ah ayaa ku dhimatay halka 3 kalena ay ku dhaawacantay Khamiistii maanta qarax miino ah oo ka dhacay xaafada Taleex ee degmada Hodan ee gobalka Banaadir.
Afhayeenka Wasaarada Warfaafinta, Ismaciil Mukhtar Cumar ayaa sheegay in Al-Shabaab ay bartilmaameeysteen dad rayida oo aan waxba galabsan oo saarna moota Bajaaj.
“Qaraxa waxa uu dilay haweenay iyo cunugeeda oo mooto saaran iyo qof wadada marayey halka 3 ruux kale ay dhaawacmeen, waxaa meesha maray gaadiid nooca ciidanka ah ilbiriqsiyo ka hor qaraxa‘‘, ayuu yiri Mukhtaar Oronjo.
Afhayeenka Wasaarada Warfaafinta ayaa si adag u cambaareeyey qaraxa, isagoona intaasi ku daray in aan la dhalaysan fariimaha amni ee la xiriir bed-qabka waddooyinka la adeegsanayo.
dad shacab ah
Qarax khasaare geystay